PSJTV | डेंगीबाट ६ हजार २६ जना संक्रमण
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यो वर्ष ४२ जिल्लामा ६ हजार २६ जनामा डेंगी रोगको संक्रमण भएको जनाएको छ । गएको वैशाखदेखि असार अन्तिमसम्म तीन हजार ४३५ जनामा डेंगी देखिएको थियो । साउन १ गतेयता थप दुई हजार ५९१ मा रोगको संक्रमण देखापरेको जनाइएको छ ।
सबैभन्दा बढी ३ नम्बर प्रदेशमा एक हजार ९३ जनामा रोग देखिएको छ भने प्रदेश नम्बर–१ मा ७५३ जना डेंगीबाट प्रभावित भएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. विवेककुमार लालले डेंगीबाट हालसम्म चारजनाको मृत्यु भएको भन्दै सबैभन्दा बढी कास्की, मकवानपुर, सुनसरी र चितवन जिल्लामा प्रभाव देखिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले डेंगीको प्रकोप बढेका बेला कर्मचारीलाई ‘फाजिल’मा राखेर सरकारले समस्यामा पारेको गुनासो गरे । कार्यक्रममा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले एक दिनमा २५० जना डेंगीको परीक्षण गर्न आउने गरेको बताए ।
सो अस्पतालमा हाल ३० जना बिरामी भर्ना भएको भन्दै डा. पाण्डेले डेंगी संक्रमणको शंका लागे चिकित्सकको सम्पर्कमा आउने र झोलिलो पदार्थ खाने तथा आराम गरेमा निको हुने बताए ।
सरकारले यसै वर्ष बढाएको तलबमानअनुसार नायब सुब्बाको तलब २८ हजार २ सय छ। अचाक्ली महँगीमा यही तलबले गुजारा चलाएर थोरै पनि बचत निकाल्नु आम सुब्बाका लागि सपना मात्रै हुन सक्छ। तर ...
८ मंसिर, काठमाडौं। सत्ता जोडघटाउमा प्रभाव नपार्ने भए पनि प्रमुख दुई दलले उपनिर्वाचनलाई जनमत सर्वेक्षणका रूपमा लिएका छन्। सत्तासीन नेकपाले आफ्नो पक्षमा जनमत कायमै रहेको देखाउन जित्नैपर्ने नीति लिएको छ भने ...